Yakanakisa Yakarukwa Brake Hose Mugadziri uye Fekitori | Jinxing
1) Wide tembiricha yekushandisa renji: -200 ~ + 250 centigrade;
2) Kuramba kune angangoita ese makemikari anoparadza;
3) Antistick zvivakwa;
4) Yakaderera kwazvo coefficient yekukwesana;
6) Zvakanakisa zvemagetsi zvivakwa;
7) Zvakanaka zvemagetsi zvivakwa;
PTFE ine simba rakasarudzika re carb-onfluorine bond uye yakanyanya mamorekuru uremu uye ine zvinotevera zvinotevera zvivakwa.
8) Hupenyu hwakareba pasina dambudziko rekukwegura.
1) Simbi isina simbi yakarukwa bhureki Hofisi chimiro: Hose Yemukati ndeye PTFE KANA Nylon, Hose yepakati yakatetepa yakarukwa nesimbi isina tsvina, Hose kunze rukoko ndeye PU kana PVC Chivharo, Kuputika-chiratidzo uye chipenga-chiratidzo.
2) Hose KORORI: RED, RUVARA, YELLOW, REMAHARA, yakajeka, nhema etc.
3) Stainless simbi yakarukwa hosi inoshandiswa kune hydraulic brake system yemotokari uye midhudhudhu.
4) SS akamedura hosipaizi saizi: 3.2mmx7.5mm
5) SS akamedura hose mureza: SAE J1401
6) SS akamedura hosvo Anoputika kumanikidzwa: 69Mpa nokuti PTFE hosipaipi, 49Mpa nokuti zvinhu zvenaironi moyo
Kuvandudza mashandiro emotokari uye nekunzwa neDOT-Inoenderana nesimbi Simbi Yakarukwa Brake Lines. Stainless Simbi Yakarukwa Brake Lines inopa inokurumidza, yakasimba, inowirirana phedhi mhinduro nekuchengetedza isingachinjike brake kumanikidza. Pamusoro pezvo, mitsara yesimbi isina simbi inopa chaiyo mabhureki modulation, kunyanya panguva yechikumbaridzo braking. Iko kuvandudzwa kwekunzwa kwekutyaira kunonyanya kushamisa pamotokari dzekare uko iyo tambo yerabha tambo inogona kunge yakapfava uye kuzvimba nekuda kwezera.
mabhureki emitsetse ane PTFE (inowanzo kunzi Teflon) yemukati mutsara iyo inotakura iyo brake fluid, iyo inozofukidzwa neyakaganhurirwa nesimbi isina simbi yakarukwa yakarukwa. Iyo PTFE chubhu inopesana nekuwedzera mukumanikidzwa uye haizodzikisira kubva pakuratidzwa kune brake fluid.
Iyo yakarukwa simbi isina simbi inopa rutsigiro rweiyo PTFE uye kuruka kwakasimba zvakanyanya pakurwisa kunoitika uye abrasion. Tevere iyo isina waya yakarukwa hosipaji yakaputirwa neakajeka abrasion inodzivirira PU chifukidzo chekudzivirira kwakanyanya kubva kune chaffing uye sisitimu yekuyamura michina inosimbisa kupera kwekupedzisira. Mhando dzakasiyana dzemagumo dzinowanikwa kuti dzizadzise zvido zvekushandisa. Fittings dzese dzakagadzirwa kuti dzikwane uye durability. Mabhureki ese anodiwa uye zvekusunga zvinosanganisirwa nekitsi yega yega.
Pashure: Brake Hose Assembly (yakajairwa neSAE J1401)
Zvadaro: Mhepo Yakaputsa Hose
Stainless Yakarukwa Brake Hose